IPHONE ပေါ်မှာလှည့်ဖို့ကိုဘယ်လို - IOS အတွက် - 2019
အဓိက IOS အတွက်
Apple ကအမြဲတမ်းကုမ္ပဏီစမတ်ဖုန်းအတွေ့အကြုံရှိသုံးစွဲသူများပေမယ့်နာရီကိုသူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်မလိုချင်ကြဘူးသောသူသည်အသုံးပြုသူများမှအာရုံစူးစိုက်မှုမရသာပေးဆောင်ဘို့ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေအဖြစ်မိမိတို့၏ Device များစေရန်ကြိုးစားခဲ့လို့ပဲ။ သို့သော်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မေးခွန်းများကိုထမည်, ဤဿုံပုံမှန်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့်ယနေ့ကျနော်တို့က iPhone ကို enable ဖို့ဘယ်လိုမှာကြည့်ရှုမည်။
iPhone ကို Turn
device ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ထည့်သွင်းရပါမည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နှစ်ခုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။
Method ကို 1: ပါဝါခလုတ်ကို
စာနယ်ဇင်းနဲ့ပါဝါခလုတ်ကိုကိုင်ထားပါ။ iPhone အတွက် SE နဲ့အစောပိုင်းမော်ဒယ်များတွင်ပြုလုပ် (အောက်တွင်ပုံရိပ်ကြည့်ပါ) device ကို၏အထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် - စမတ်ဖုန်း၏ညာဘက်ဧရိယာ၌ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
စက္ကန့်အနည်းငယ်ပြီးနောက်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပန်းသီးလိုဂို၏ရုပ်ပုံနှင့်အတူပေါ်လာသော - ခဏကနေပါဝါခလုတ်ကိုဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအပြည့်အဝဝန်ဘို့စောင့်ဆိုင်းခြင်း (operating system ကို၏မော်ဒယ်နှင့်ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. ကတဦးတည်းအနေဖြင့်ငါးမိနစ်မှဘယ်နေရာမှာမဆိုယူနိုင်ပါသည်) ။
Method ကို 2: တာဝန်ခံ
သငျသညျကိုဖွင့်ဖို့ကို Power button ကိုသုံးစွဲဖို့မတတ်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်ဥပမာ, ကဝန်ဆောင်မှုထဲကဖုန်းကိုတခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာ activated နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းအားသွင်းချိတ်ဆက်ပါ။ ဒါကြောင့်ယခင်က screen ပေါ်မှာ, အင်အားသုံးခြင်းဖြင့်ပိတ်ထားခဲ့သည်လျှင် Apple ကလိုဂိုပုံပေါ်ပါတယ်။
device ကိုအပြည့်အဝဆေးရုံကဆင်းပြီဆိုရင်, သင်တာဝန်ခံပုံရိပ်များ၏တိုးတက်မှုများကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှဤကိစ္စတွင်အတွက်တယ်လီဖုန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်စွမ်းရည်များပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်အကြောင်းကိုငါးမိနစ်ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်, ထို့နောက်သူကအလိုအလျှောက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံးအမဒုတိယနည်းလမ်းများကိုယင်းယူနစ်ကိုဖွင့်မကူညီဘဲနေလျှင်, ကအမှားနားလည်သင့်တယ်။ ဂရုတစိုက်ဖတ်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်, ဝန်ဆောင်မှုခေါ်ဆိုခရှောင်ရှား - အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်ဖုန်း switched မရနိုငျသောအကြောင်းရင်းများကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။
Read more: iPhone ကိုမပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်
သငျသညျဤစာတမ်း၏ဘာသာရပ်အကြောင်းကိုမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်ထိုသူတို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ - ကျနော်တို့ကကူညီရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: AirPods2& iPhone 11 - Everything We Know! + Exclusive Leak (ဇူလိုင်လ 2019).
အထင်ကြီးကြောင်းဓာတ်ပုံများအခမဲ့အစီအစဉ် - Google ရဲ့ Picasa
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် TV ပေါ်မှာ HDMI-connector ကိုလိုအပ်ပါဘူး
သင့်ရဲ့ Android အပေါ် font ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်
Virtual က Windows desktop ကို
Adobe က Gamma - အစီအစဉ်ကို Adobe အားဖြင့်ဖြန့်ဝေ၏မကြာသေးမီကသည်အထိအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်မော်နီတာ setting များကိုတည်းဖြတ်အရောင် profile များကိုထိန်းညှိဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သငျသညျထို program ကိုစတငျသညျ့အခါဖွင့်လှစ်သော panel ကိုအပေါ်အဓိက panel ကနေ, အခြေခံ tools တွေကိုချိန်ညှိဖို့စီစဉ်ပေးနေကြသည်။ ဤသည် gamma, အဖြူရောင်အချက်နှင့်ဆနျ့ကငျြဘအလင်းရောင်။ ဆက်ဖတ်ရန်
မှော် Wi-Fi 1.0.8.0 ။
Item မတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ် - ဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါကိုဖျက်ပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
https://termotools.com my.termotools.com © IOS အတွက် 2019